Ngwa ngwa ese foto 3D mepụtara njikọ dị iche iche - LucidPix
Dika obodo emechiri obodo mgbe emechiri onyunyo nke COVID-19, Lucid anopula aka na nbuputa nke onyonyo ohuru nke 3D na CES 2020, nke anakpo LucidPix. E guzobere aha mmadụ 1,000,000 maka ngwa ahụ ka ndị otu ahụ na-arụ ọrụ iji na-emeziwanyewanye na teknụzụ ọgụgụ isi (AI) na iji mezie ahụmịhe nke ngwa. Site n’inwe ebum n’obi iji mee ka ndị okike gosipụta onwe ha n’ụzọ zuru ezu ma tinye aka na ntanetị, nzaghachi sitere na ndị nnwale beta a dị oke mkpa. Ngwa ahụ dị mkpa karịa ka ọ dịbu mgbe ọtụtụ ndị ọrụ na-ejedebeghị na ọrụ, ịmụ ihe na itinye aka niile site na ihu abụọ, ihu abụọ nwere ihu abụọ. Ihe onyonyo onyonyo 3D ga - enwe ike ijikọ ezinụlọ na ndị enyi n'ụzọ ha na - ejikọbeghị mbụ. Mgbe eserese na-enyo enyo, enwere ndụ ịdị ọcha nke na-anọghị na foto 2D oge niile.
Onye isi oche na onye na-emekọ ihe ọnụ Han Jin ghọtara nke a na nkwukọrịta metụtara ọ na-enye; Ugbu a, karịa mgbe ọ bụla, ndị mmadụ na-achọ ụzọ ha ga-esi gbalaga n'ịntanetị ka ha na-anọ n'ụlọ. Dị ka a manyere anyị itinye ọtụtụ ụbọchị anyị n'ịntanetị, anyị abanyela na oke na etu anyị si ekwupụta onwe anyị, "Jin kwuru. "N'oge oge ejighi n'aka, anyị nwere obi ụtọ na anyị nwere ike inye ndị mmadụ ihe okike na-enye ohere ka ha soro ndị ezinụlọ na ndị enyi kerịta ihe ha na-ahụ n'ezie n'akụkụ atọ a."
Ọ bụ ezie na mba ebidola imepe ụzọ, ọtụtụ ndị ka na-ala azụ itinye aka na mmekorita mmekọrịta "nkịtị", anyị nwekwara ike iche mgbochi ọdịda ọzọ - ọ nweghị onye doro anya na ihe ga - eme ọzọ. Ma ọ bụ maka ụbọchị kwa ụbọchị n'etiti ezinụlọ na ndị enyi na-agbasa n'ụwa ma na-achọ ịkọrọ ahụmịhe ha, ma ọ bụ njikọ pụrụ iche n'oge a na-amachibido nhọrọ anyị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, LucidPix na-enye ọpụpụ ihe okike na-adịghị adị ebe ozo.
LucidPix dị ugbu a iji budata gam akporo na iPhone. Ngwa ahụ na-enye mkparịta ụka foto 3D na-akparaghị ókè na ndozi, nnweta LucidPix naanị, yana ịkekọrịta ọtụtụ mgbasa ozi na nyiwe ozi, yana nkwalite ngwa-ngwa na-emepe ọtụtụ atụmatụ dị elu.
Pịa ka ibudata LucidPix
LucidPix na-ejikọ otu Nde ndị ọrụ →← Etu ị ga-esi nweta 100K ọnwa kwa ụbọchị na Pinterest na otu ọnwa